Tag: Sare | Martech Zone
Haddii aad gaari wadid waxay horseed u tahay bartaada, inaad wax la adeegato, ama aad siiso taageerada macaamiisha irs ayaga ayaa filaya maalmahan in degel kasta uu leeyahay karti wada hadal isku dhafan. In kasta oo taasi u muuqato mid fudud, haddana waxaa jira waxyaabo badan oo isku murugsan oo ku saabsan sheekada… laga bilaabo maareynta wadahadalka, u dulqaadashada spam, jawaab-celinta otomaatiga ah, dariiqa… waxay noqon kartaa madax xanuun. Inta badan aaladaha lagu sheekaystaa waa wax iska fudud… kaliya war-bixin dhexmarta kooxdaada taageerada iyo booqdaha bartaada. Taasi waxay ka baxdaa wax weyn
Waa Maxay B2C CRM ugu Fiican Ganacsigaaga Yar?
Xiriirka macaamiisha wuxuu soo maray wado fog tan iyo markii la aasaasay. Maskaxda 'Business2Consumer' ayaa sidoo kale u wareegtay maskax badan UX-xuddun halkii ay ka ahaan lahayd bixinta ugu dambeysa ee alaabta. Doorashada saxda ah softiweerka maareynta xiriirka macaamiisha ee ganacsigaaga ayaa noqon kara khiyaano.
Khamiista, Oktoobar 20, 2016 Khamiista, Oktoobar 20, 2016 Douglas Karr
Ganacsigeenu xoogaa waa ku gaar yahay waxaan nahay hay'ad gaar ah oo la shaqeysa macaamiil kooban. Si kastaba ha noqotee, iyada oo la socota daabacaaddan oo ay weheliso joogitaanka guud ee bulshada waxay soo saartaa waxyaabo badan oo horseed ah. Tilmaamo fara badan, dhab ahaantii, in badanaaba aanan haysan waqti iyo ilo aan ku kala shaandhayno oo aan u kala horeysiiyo mid kasta oo ka mid ah tilmaamahaas si loo aqoonsado horseedyada ku habboon ganacsigeenna. Waan ognahay inaan seegnay fursado waaweyn. Sida
Groove: Tigidhada Khadka Caawinta ee Kooxaha Taageerada
Arbacada, December 23, 2015 Douglas Karr
Haddii aad tahay koox iib ah oo soo galaysa, kooxda taageerada macaamiisha, ama xitaa hay'ad waxaad si dhakhso leh u aqoonsan tahay sida rajada iyo codsiyada macaamiisha ay ugu lumi karaan mawjadaha isdaba-joogga ah ee emayllada ee qof walba ka helo khadka tooska ah. Waa inay jirtaa qaab kafiican oo lagu ururiyo, loogu qoondeeyo, laguna raadjoogo dhammaan codsiyada furan ee shirkaddaada. Taasi waa halka ay ka caawiso barnaamijka softiweerka miiska oo caawiya in la hubiyo in kooxdaada ay diiradda saareyso ka jawaabiddooda iyo adeegga macaamiisha.